AMISOM oo sheegtay in dawladdu ka taliso inta badan Muqdisho, kase digtay soo noqoshadaha barakacayaasha ee xilligan. – Radio Daljir
AMISOM oo sheegtay in dawladdu ka taliso inta badan Muqdisho, kase digtay soo noqoshadaha barakacayaasha ee xilligan.
Maarso 10, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Mar 10 – Ciidamada nabad-ilaalinta AMISOM ayaa sheegay in dawladda federaalku gacanta ku haysto inta badan magaalada Muqdisho isla markaana ay taageerayaan ciidamada AMISOM iyaga oo dhinaca kalena ka digay in ayan dammaanad qaadi karin xilligan ammaanka dadkii horay uga barakacay magaalada Muqdisho haddii ay soo noqdaan.
Afhayeenka AMISOM Barigye Bo-Huku ayaa sidaa saxaafada u sheegay maanta (Khamiis) mar ay ciidamadiisu soo bandhigayeen baro hor leh oo ay ka dageen magaalada Muqdisho oo ay ku tilmaameen wali in ay yihiin goobo dagaal oo aan u diyaarsanayn in ay shacabkii barakacay ku soo noqdaan. Maalmo ka hor ayuu maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay in dadkii ka barakacay Muqdisho ay haatan ku soo noqon karaan rugahoodii.
Guluf todobaadyadii la soo dhaafay ay ciidamada dawaladda federaalka iyo kuwa AMISOM ku qaadeen kooxda Alshabaab ayaa la shageeyaa in ay kula wareegeen goobo ka mida magaalada Muqdisho isla markaana ay ka samayteen baro cusub magaalada. Baraha ay maanta soo bandheen ciidamada AMISOM ayaa ku kala yaal xaafadaha Hodan iyo Dharkaynleey. Madaxawayne Shariif oo isagu si shakhsi ah u hogaaminaya dagaalka ayaa sheegay in ay Alshabab ka nadiifin doonaan magaalada Muqdisho iyo goobo kale oo ka mida Koonfurta Soomaaliya, waxana uu dadwaynaha ugu baaqay in ay difaaca ka qayb-galaan. Madaxwaynaha ayaa maalmihii la soo dhaafay isaga oo labisan dharka ciidamada waxa uu si is-daba joog ah u booqanayay jiidaha hore ee dagaalka isaga oo dhinaca kalena xilalkii ka qaaday saraakiishii sarsare ee ciidanka iyo bilayska.
Sidoo kale ciidamada dawladda federaalka oo garab ka helaya koox-diineedka hubaysay ee Ahlu-Sunnah Wal-Jamaacah ayaa guulo ka soo hoyay dagaallo ka socda gobolka Gedo ee Soomaaliya kuwaas oo ay kula jiraan kooxda Alshabaab. Guddoomiyaha gobolka Gedo ayaa dhawaan waraysi uu siiyay Daljir waxa uu ku sheegay in ay ciidamada dawladdu gacanta ku hayaan inta badan gobolka marka laga reebo degmada Baardheere. Shalay ayay mas’uuliyiin ka tirsan Alshabaab oo shir jaraa’id ku qabtay Baardheere waxa ay ku hanjabeen in ay dagaal aan raxmad lahayn ku qaadi doonaan ciidamada dawladda federaalka iyo xulafadooda.
Dadaalladan ay dawladda federaalka KMG ah isku dayayso in ay ku xoojiso awoodda ay ku leedahay dalka, ugana adkaato Alshabaab ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay muddo aad u kooban uga harsantahay muddada sharciga ah ee jiritaankeeda, inkasta oo uu barlamaanku si iskii ah dhawaan u sameeyay xilli kororsi saddex sano ah, tallaabadaas oo ay inbadan oo ah saamilayda arrimaha Soomaaliya ee gudaha iyo dibaddub ku tilmaameen md qayrul-mas’uulnimo ah. Sidoo kale tallaabooyinka cusub ee ay dawladda federaalka u qaaday dhinaca ammaanka ayaa kus oo beegmaya iyada oo beesha caalamka iyo dawladda Puntland ay aad u dhaliileen siyaasadda fadhiidnimada ah ee hogaanka dawladda.
Falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya in dadaalladan cusub ee dawladdu ay qayb ka tahay qorshaha ay ugu tala-gashay masiirkeeda awoodda wixii ka dambeeya bisha Agoosto ee sannadkan 2011-ka, waxana ay isa su’aalayaan sida ay uga dhabayn karto iyo awoodda ay u leedahay inay Alshabaab ka qaalib noqoto inta ka horaysa muddada gaaban ee u hartay iyo waliba awooddeeda ku aaddan sii haynta iyo xasilinta goobaha ay gacanta ku dhigtay todobaadyadii la soo dhaafay.
Midnimo: Furaha Halganka lagu soo celinayo gobolada maqan ee SSC.